ViduPM: An Online SEO Project Management, Kushuma, uye Invoicing Platform | Martech Zone
ViduPM: An Online SEO Project Management, Kushuma, uye Invoicing Platform
NeChishanu, Nyamavhuvhu 3, 2018 Mugovera, Nyamavhuvhu 4, 2018 Douglas Karr
Nepo mazhinji emadhijitari ekushambadzira ejensi anonyanya kutsvaga injini yekutsvaga uye aripo zvishandiso zvisingaverengeki pamusika weSEO, ivo vanowanzo tarisa pane hunyanzvi kuendeswa kweSEO uye kwete iko chaiko manejimendi evatengi. ViduPM yakavakirwa zvakananga kune SEO-yakatarisana nemasangano kubata, kubatana, kurondedzera, uye kunyangwe invoice yako SEO vatengi.
ViduPM Zvimiro Zvinosanganisira:
SEO Project Management - Project Management inoramba iri pfungwa yakakosha yekubudirira kweTimu Management.
SEO Management - ViduPM inogadzirira kuzadzikisa zvido zvemadhijitari ejensi ekubatana kwevatengi.
Invoice Management - ViduPM ine chishandiso chekutarisa uye kugadzirisa webhu kubhadharisa & nekupa hukama huri nani.
Kuzivisa Pakati - auto-inogadzirwa yekutsvaga injini yekumisikidza mishumo.
Time Management - Tevera nguva iyo iwe nechikwata chako yamunoshandisa pane yega projekiti neViduPM nguva yekutevera chinhu.
File Management - ViduPM inobatsira iwe chengeta ako ese mafaera akarongeka & gara uri-kusvika-kudhara.
Communications - gara pane iro peji riine zvirinyore timu timu maturu
Chechitatu Kubatanidzwa - ViduPM ine zvakawanda chaizvo zvekupa maererano ne3rd Party Kubatanidzwa zvakare.
Ona rondedzero izere ye zvese zvinoitwa paViruPM saiti.
Tags: digital kushambadzira agencydigital chirongwa chebasainvoiceinvoicekeyword chepamusoroproject managementchinzvimboseoseo agencyseo chikuvaseo chirongwa manejimendiseo toolvidpm
10 Pinterest Statistics Imwe Mamaki Anofanira Kuziva